कयौँ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूको गतिविधिकै कारण जनता आजित छन् । जताततै एउटै गुनासो, एउटै नैराश्यता अनि एउटै आरोप सुनिन्छ- देशको यो हालतको जिम्मेवार यहाँका नेताहरू हुन् । कार्यकर्ताहरू हुन् । यिनीहरूले नै देश बिगारे ! यो भनाइमा आंशिक सहमत हुन सकिएला तर पूर्ण सहमत हुन पक्कै सकिँदैन । किनभने नेता भनेका कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका ‘एलिएन’ होइनन कि जो अचानक प्रकट भएर हामीमाथि शासन गरून् ।
यि त हाम्रै समाजका सहउत्पादन हुन् । तपाईं हाम्रै प्रतिनिधि अनुहार हुन् र तिनीहरूलाई जन्माउने हुर्काउने र मदमस्त हात्ती बनेर मात्तिने आधार प्रकट गर्ने स्वयम् हामी नै हौं । कुनै तेस्रो ग्रहको अदृश्य शक्तिले होइन । दोषी म हो, तपाईं हो र हामी सबै हौं । हाम्रो दुर्भाग्य हामीले नेता त जन्मायौं तर एउटा पनि राजनेता जन्माउन सकेनौं । शासक जन्मायौं तर एउटा पनि कुशल प्रशासक जन्माउन सकेनौं । लुटेरा स्वार्थी नेता मात्रै जन्मायौं ।
घुम्ने कुर्चीमा जन्मजात तानाशाह भएर कोही जन्मदैँन । तिनीहरूलाई त्यो स्थानमा पुर्‍याउने हामी हौं, मोहनदासलाई गान्धी बनाउने हामी हौं । आखिर दोष तपाईं हाम्रो पनि छ । दुर्गम झुपडीमा जन्मेर सिंहदरबारको कुर्सीमाथि विराजमान गराएर श्री ८ बनाउने पनि हामी नै हौं । टोलटोलमा टोलेराजा जन्माएर पिर्के सलामी दिने पनि हामी नै हौं।
उनीहरूको झोला बोकेर, चाप्लुसी गरेर, हरेक गल्तीलाई सही भन्दै अन्धभक्त समर्थक भएर तिनीहरूभित्र सुतेको जंगबहादुर जन्माउने पनि हामी नैं हौं । हिटलर मुसोलोनी जन्माउने हामी हौं । सही व्यक्ति, सही स्थान छनौट गर्न नसकेर गलत व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने अनि बर्बाद गर्‍यो, सखाप गर्‍यो भनेर आँसु बगाउने पनि हामी नै हौं । केबल हामी हौं ।
दोषी नेताहरू होइनन् । प्रमुख दोषी हामी हौं, जसले प्रजातान्त्रिक संस्कारमा व्यक्ति चुन्न पाउने अधिकारको सही प्रयोग गर्न जानेनौं र अनुपयुक्त पात्रलाई अनुपयुक्त स्थानमा चुनेर पठायौं । प्रतिवाद गर्न मन लाग्छ । आफैंलाई चिथोर्न मन लाग्छ । चिच्चाएर संसारलाई सुनाउन मन लाग्छ- ‘नेताहरूले बिगारेका होइन देश । तिमीले बिगारेका हौ। मैले बिगारेको हो, हामी सबै मिलेर बिगारेका हौँ ।’
कसरी भन्न सक्छौं नेताले बिगार्‍यो देश भनेर ? देश बिगार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशको भूगोल बेच्ने दुस्साहस कसरी पैदा भयो नेतामा ? अर्को मुसोलिनी कसरी जन्मियो नेताभित्र ? देशमा कोरोनाले अत्तालिएका बेला मध्यावधिमा जाने दुस्साहस गर्ने नेतालाई पठाउने पनि तपाईं हामी नै हौँ ।
गोयबल्स शैलीका हामीहरूको क्षमताले महात्मा गान्धी कहिले जन्मिन्नन् । हामीले जन्माउने भनेको हिटलर हो र अहिलेसम्म जन्माएका पनि हिटलर नै छौं । कुन नैतिकताले आरोप लगाउँछौं मात्र नेता कार्यकर्तालाई ? र, आफू पानीमाथिको ओभानो बनेर बस्छौं।
बाँदरको प्रवृत्ति नै भत्काउने हो र बिगार्ने हो । घर बनाउन बाँदर पठाउने अनि रुने पनि ? भताभुङ्ग पार्‍यो, खत्तम पार्‍यो, रुनुनै थियो किन सुम्पियौं बादरलाई आफ्नो सुन्दर घर, सुन्दर बगैंचा अनि साँचिएका सपनाहरू ? हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन ? बाँदरले भत्काउँछ भनेर। बाँदरले बिगार्छ किनकि त्यो उसको बानी हो, त्यो उसको धर्म हो। त्यस्ता बाँदरहरूलाई आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार सुम्पिने बेला मदहोस भएर झुठा आश्वासन, भाषण अनि रक्सी मासुमा नैतिकता बेच्ने! अनि पछि कराउने पनि सबै भत्कायो भनेर?
कागतीको बिरुवा रोप्छौं अनि कराउछौं आँप किन फलेन भनेर? सिस्नु रोप्छौ अनि गाली गर्छौ गुलाब किन फुलेन भनेर ? रोप्नुभन्दा पहिले सोचेनौ तिमी के रोप्दैछौ? तिमीलाई थाहा छैन? जे रोप्यो त्यही फल्छ यो प्रकृतिको नियम हो। गधा पाल्यौं अनि दूधको आशा गर्छौं? दूध पिउनुथियो त गाई पाल्नु पर्थ्यो, यो कुरासम्म हामीले बुझ्न सकेनौं भने अरुलाइ सरापेर हुन्छ? नेतालाई गाली गरेर हुन्छ?
देश भनेको घर हो। कहिले सोच्यौ घर बनाउने गलत मिस्त्री छनौट गर्दा के हुन्छ? गलत मिस्त्री छनौंट गरेर घरको छानोको जिम्मा दिने अनि त्यही छानो भत्केर अपाहिज हुने, घाइते हुने हाम्रो नियती हो। र यो नियती हामी वर्षौंदेखि भोगिरहेका छौँ। र ठोकेरै भन्छु अझै कयौ वर्ष भोग्ने पनि छौं, त्यति बेला सम्म जबसम्म हाम्रो चेतनाको दियो बल्दैन। त्यति बेला सम्म जबसम्म हामीभित्र स्वाभिमानी नागरिक जन्मिँदैन।
कुन इतिहासमा लेखिएको छ हामीलाई अरुले बनाएर दिन्छ भनेर? जे बनाउनु छ आफैं बनाउनु छ। जे रोप्नु छ आफै रोप्नु छ र जुन बीउ रोप्यौं त्यसैको फल काट्नु छ। दोषी कुनै सति होइनन्। न त सतिले सरापेको नेपाल खाल्डो नैं हो। दोषी तिमी, दोषी म, दोषी हामी हौं। हाम्रो चरित्र दोषी हो। हाम्रो चेतनास्तर दोषी हो। हाम्रो चाकरीबाज अनि शक्ति। सत्ताको ‘ज्यू हजुरी’ गर्ने बेचिएको नैतिकता दोषी हो। नेताहरूलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि किन सोच्दैनौं हामी? एक पटक होइन बारम्बार गलत छनौट किन? एक पटकको धोकाले नचेतेर बारम्बारको धोका किन?
थाहा छ फोहोर भइसक्यो, गन्हाइ सक्यो तै पनि त्यही बासी सडेगलेको अचारमा झिंगाजस्तै भन्किरहने हामी किन? कहिलेसम्म? कहिले सम्म हामी झोले भनेर बस्ने? कहिलेसम्म पार्टीका हनुमान छाप भएर जिन्दगी बिताउने? कहिलेसम्म भ्रष्ट नेताहरूका धुर्त पासाहरूको सकुनी खेल हेरेर रमाउने? हामीले बुझिसक्यौँ यी भ्रष्टहरूबाट देश बन्दैन। फेरि किन यिनै धृतरास्ट्रहरूको जिम्मा लगाउँछौँ आफ्ना सपनाहरू, आफ्ना रहरहरू र सन्तानका भविष्य?
दोषी कोही एकजना होइन दोषी हामी सबै हौं। ज–जसले यी भ्रष्टहरूलाई देश बनाउने जिम्मेवारी दियौं। समर्थक बन्यौं। थाहा थियो यी आफू बन्नेछन तर देश बन्ने छैन। आफू बाँच्ने छन् तर देश हार्नेछ। आफू जिउने छन तर हाम्रा सपना मार्ने छन्। आज पनि त्यहि देखाए फेरि हाम्रै सपनाहरूको सामूहिक चिहानमा उभिएर फेरि अर्कोपटक हाम्रै घर दैलोमा आउनेछन् भोट माग्न, चुनाव जित्न। धूर्त ओठहरू बाहिर कृत्रिम मुस्कुराहट बोकेर, गुलाफको फूलभित्र छुरा लुकाएर। त्यै पनि हामी यिनीहरूमाथि नै भरोसा गर्नेछौं। जिम्मेवारी दिनेछौं, आफ्नो रोएको भूत र रुँदै गरेको वर्तमान सजाउन।
भत्केको हाम्रो छानो अनि चर्केको पार्टी बनाउन। तर फेरि हाम्रो दुर्भाग्य! नयाँ छानो त कताकता, भएकै छानो झन् भत्काउने छन्। बचेको पेटीमा प्वाल पार्ने छन्। चिथोरेर मार्ने छन् नेता दोषी होइनन्, हाम्रो हाम्रो सोच दोषी हो। हाम्रो छनौट दोषी हो, हाम्रो मानसिकता दोषी हो। बाजे बराजुको पालादेखि देख्दैछौं कहिले घर बनाएनन् यी आधुनिक नेताले अनि भित्रभित्र बुझेका पनि छौं यिनीहरूको हातबाट हाम्रो सुन्दर घर कहिले बन्दैन पनि। तैपनि फेरि बारम्बार। एक पटक होइन बारम्बार उनीहरूलाई नै अख्तियारनामा दिएर पठाउँछौं। किन?
फेरि एउटा बाँदरको सपनाभित्र हाम्रो घर बनाउने, हाम्रो जिन्दगीमा सुख समृद्धि ल्याउने सपना देख्छौं। फूलमाला लगाएर पठाउँछौ अरु धेरैधेरै नेताहरूको ठूलो हुलमा नयाँ बानेश्वरतिर तर उ सत्ताको सिँहासनमा हराउँछ। मदहोस भएर श्रीपेच लगाएर बस्छ। चिन्दैन हामीहरूलाई। गन्दैन कसैलाई। आफू हिँडेको आँगन बिर्सिन्छ र आफू अडेको जमिन चिन्दैन।
आखिर कहिलेसम्म? कहिलेसम्म यी नेताहरूको विश्वासमा आफ्नो भविष्य तहसनहस गर्ने हामी? भूत बर्बाद भएको छ। वर्तमानको अत्तोपत्तो छैन। भविष्य अन्धकारमय छ फेरि पनि किन विकल्प नखोज्ने हामी? आजको आवश्यकता भनेको झुठो नारा र उग्र राष्ट्रवाद होइन। खानेपानी हो, स्तरीय विद्यालय हो, बाटोघाटो हो, स्वास्थ हो। कसैले अकालमा मर्न नपरोस्। एउटा उचित अस्पताल होस्। हिँड्न लायक सडक र गुड्नलायक आँगन होस। स्तरीय खानेपानी र शिक्षा होस् ।
यो गन्हाएको राजनीति र भ्रष्टहरूको लुटतन्त्रबाट जोगिन एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिएको छ। अझै जोड दिएर भन्छु एउटा हिटलर चाहिएको छ। मुसोलिनी चाहिएको छ। टुँडिखेलमा ठिंग उभिएको जंगबहादुर होइन रगत लत्पतिएको खुकुरी बोकेर भ्रष्ट अनि विकृतीविरुद्ध जाइलाग्ने एउटा भीमदत्त चाहिएको छ।
कहिलेसम्म यी गैरजिम्मेवार नेताहरूबाट सुन्दर फूलबारी, यो प्यारो नेपाल लुटाइरहने? भत्काइरहने? अनि हामी टुलुटुलु हेरिबस्ने लाचार भएर? निरीह भएर भूपी शेरचनले भनेजस्तै: हामी अन्धा हौं। हामी दिमाग भएर पनि दिमाग नभएका मुर्ख हौं। मरुभूमिमा छाडिएका एक हुल भेंडा हौं।
हाम्रो काम भनेको आफ्नै आँखा अगाडि सुन्दर फूलहरू च्यातिएको, रेटिएको, निमोठिएको हेरिरहने आखिर कहिलेसम्म? यी भत्किएका सडक अनि च्यातिएका रहरहरू हामीलाई गिज्याइरहेछन्। आखिर कहिलेसम्म? हामी नेपाली जो पर्‍यौंँ। धेरै बुद्धिमान छौं र पो बारम्बार दूधको चौकिदारी गर्न बिरालोलाई पठाइरहन्छौं। अनि सपना पनि देखिरहन्छौं भोलि यो दूध जमेर दही बन्नेछ अनि त्यो दहीबाट मिठामिठा परिकार बनाएर खानुपर्छ भनेर। भोका कुपोषणले ग्रसित बच्चाहरूलाई पनि खुवाउनुपर्छ भनेर।
तर दुर्भाग्य त्यो दही कहिलै जमेन र लेखेर नै राख्नुहोला यी गैरजिम्मेवार नेताहरूको हातबाट कहिले जम्ने पनि छैन। फेरि एकपटक भन्छु, दुनियाँले सुनोस्, संसारले सुनोस्। यी डाँडाकाडा भिर पखेराले सुनोस्।
अहिले नेताहरूको व्यवहारको व्यापक विरोध भएको छ। पछुताएका छन टोलबासीहरू, धिक्कार्दैछन आफैलाई। तर यो पछुताउ थोरै हो। यो धिक्कराइको कुनै अर्थ छैन। भोलि फेरि चुनाव हुनेछ, सत्ताको माड खाएर झन बलियो बांगो भएका यी नेताहरू झर्नेछन् सिँहासनबाट र फेरि चुनाव लडनेछन्।
अहिले जति नै एकअर्काका दुश्मन भए पनि यी जुधेका नेताहरूबीच कार्यगत एकता हुनेछ। मोलमोलाई हुनेछ। बगैंचाहरू भाग लगाइनेछन्। हाम्रा सपनाहरूमाथि बार्गेनिङ चल्ने छ। कुनै योजना छैन यी अबुझकीहरूसँग। कुनै सपना देखेका छैनन् यिनीहरूले। केही भिजन बनाएका छैनन्। यी त केबल सपना देखाउन आएका हुन्। भावना किन्न आएका हुन्। सम्मान थापेर आफूलाई जंगबहादुरको सन्तान सम्झिँदै मच्चिन आएका हुन्। कलाविहीन कलाकार हुन्, कलाकारिता देखाउन आएका हुन्।
अब ढिलो चाँडो केहि समयमा नै फेरी चुन्ने अवसर आउनेछ। अवसर आउनेछ आफ्नो भाग्य विधाता, आफ्नो सुन्दर बगैंचाको चौकीदारको छनौट गर्ने। अब भने केही नयाँ सपना देख्नुपर्छ। केही नयाँ सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ। भावनाले होइन विवेकले चलाउनुपर्छ आफूलाई। यी जुधेका नेताहरूको विरुद्दमा भिजनको आवाज गुन्जिनुपर्छ। सपनाको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। नयाँ सपना देख्नुपर्छ।
हाम्रा अँधेरा भिर पाखामा पनि बत्ती बल्छ कि? हाम्रो सुकेको आँखाले पनि सपना देख्छ कि? हाम्रो हाँसो हराएको उजाड ओठमा पनि लाली छाउछ कि? एउटा विश्वास लिएर फुलाउनुपर्छ, आउने वसन्तमा नयाँ पालुवाहरू, नयाँ सपनाहरू र नयाँ सम्भावनाहरू। अब बुझ्नुपर्छ हामीले बाँदरहरू पहिलेभन्दा हट्टाकट्टा भएर आउँनेछन। अब ढेडुहरूको हिँडाइले जमिन थर्किनेछ। सुन्दर बगैंचा लुटेर ढाडिएका नेताहरू झन् ढाडिएर अबको चुनावमा पनि आउनेछन्। फेरि एकपटक सपना बाँड्नेछन्। आश्वासन बेच्नेछन् र फेरि सपनाहरूको हत्या गर्नेछन्। चटक सुरु हुनेछ, कलाकारिता सुरु हुनेछ। फकिनेहरू फकाइनेछन्, बिक्नेहरू किनिनेछन्। आधुनिक भेंडाहरूलाई मनपर्ने रक्सी, मासु र पैसाको खोलो बगाइनेछ र स्वाभिमानको आवाज गुन्जाउनेहरूलाई रणनीतिकार षडयन्त्रकारीको आरोप लगाइनेछ। भेंडाहरूका आँखा चम्किनेछन्। अरिंगालहरू झम्टिन लागी पर्ने छन्। मुखमा पानी रसाएर बसेका झोलेहरूको दसैं आउनेछ र फेरि हामीलाई सपना देखाइनेछ विकास, समृद्धि, स्वास्थ अनि शिक्षाको ।
हामी फेरि पनि यिनै नेताहरूका झुठा सपनामा आफूलाई बेच्नेछौं। किनकि यी नेताहरू त पुराना पो हुन्। यी बाँदरहरू त आफ्नै पो हुन्। मेरा बाजे बराजुले मान्दै आएका। मेरा बाउबाजेको पालादेखि चुनिँदै आएका। हामी आस्थाका राजनीतिप्रति विश्वास लिनेहरू।
अहँ! अरु कोही चाहिन्न अब हामीलाई। नयाँहरूको के भरोसा? यिनै नेताहरूले बनाउने छन् हाम्रो फूलबारी। सिँगार्ने छन हाम्रो करेसाबारी। ‘यो नेता त्यो नेता’ भन्नु केही छैन। हामी परिवर्तन हुन चाहन्नौं र परिवर्तन भएको पनि हेर्न सक्दैनौं आफूलाई। चुनावमा जुन मुर्ख उठे पनि हुन्छ। किनकि हामीले कुनै सेवक जिताउनु छैन शासक जिताउनु छ। हाइकमान्डबाट जसलाई खटाइएको छ, त्यसैलाई जिताउनु छ।
देश बनाउँछु भनेर हिँडेका त्यो हुलमा सम्भावना भएका अनुहार पनि छन्। परिवर्तनका सम्भावना पनि छन तर हुन्न कदापि हुन्न हामीले तिनीहरूलाई कदापि छान्नु हुन्न। किनकि ती हाम्रो पार्टीका होइनन्। हाम्रो बाउले जिताएकावाला होइनन्। हाम्रो बाजेले रुचाएका होइनन्। जति नै गन्हाएको बोको किन नहोस त्यसैलाई चुन्नु छ। जति नै धूर्त किन नहोस् त्यसैलाइ छान्नु छ, किनकि त्यो मेरो हो। मेरो पार्टीको हो, मेरो खानदानी नेता हो। व्यक्ति जस्तो होस् पार्टीले जिते पुग्छ। धरातलमा केही होस् नहोस् नाराले जिते पुग्छ। हो वास्तवमा हामी सबैको मानसिकता नै यस्तो छ।
(खनिया टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तोता साथै सामाजिक अभियन्ता हुन्)